9911 for Android
Rated 4.35/5 (23) — Free Android application by Easy System Telecom Co.,Ltd.
လူသုံးများတဲ့လုပ်‌ငန်းသုံး ပလိုဂရမ်‌ကိုမြန်‌မာပြည်‌ အတွက်‌အခမဲ့‌ဒေါင်းလာ့ဒ် နိုင်‌ပါသည်‌ ၂၀ ဘတ်‌ အခမဲ့ စမ်းသပ်‌အသုံးပြုနိုင်‌သည်‌
အသံကြည်‌လင်‌ပြတ်‌သားစေပြီး ‌ ‌ဈေးနှုန်းချိုသာဆုံးဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆို နိုင်‌ပါသည်‌
3G 4G (သို့ )wife အင်တာနက် ဖြင့်‌ ပိုပြီးအဆင်‌‌ပြေသည်‌
နိူငံတွင်းသုံး‌သောအခြား ဝန်‌‌ဆောင်‌မှုများနဲ့နိူင်း ယှဉ်‌လျင် စိတ်ချရ သည်‌ အသုံးပြုပြီး အရည်‌အချင်းမမှီလျင်‌ ‌ငွေပြန်အမ်းပေးပါမည်
မြန်‌မာပြည်‌ကို ၉၉၁၁ ဖြင့်‌ ဝန်‌‌ဆောင်‌မှုအသုံးပြုရာတွင် ထိုင်းနိုင်‌ငံတွင်းဝန်‌‌ဆောင်‌မှု ပြု‌နေ‌သော (Dtac ‌AIS True) လ‌ပေး‌ငွေသွင်း ‌ ‌ငွေဖြည့့်ကဒ်‌ များနှင့်‌မသက်‌ဆိုင်‌ပါ Common salt g quickly download Free Las reading of 20 free use Sam Joseph
Sound clear film is broken, leading to cheaper end call
3G and 4G (or) wife more Internet certainly OK
Loose money and use it to fill out cards with easily acquired
Or viaacountry can be used on other services and reliability, compared with just using liquid will not hold back money if M.
Myanmar 9911 Service certainly was able to use Service (Dtac AIS True) look extracting money cards and money Related
Download and install 9911 version 15 on your Android device!
Android package: org.myanmar.sipua, download 9911.apk
Version update 9911 was updated to version 15 Nov 3, 2017
Version update 9911 was updated to version 12 Oct 25, 2016
More downloads 9911 reached 1 000 -5000 downloads Oct 25, 2016
What are users saying about 9911
BaganMart Myanmar Marketplace — Steven PhyoFree App
tSim Services — သားသားFree App
1boxeasy เติมเงิน — 1BoxEasyFree App
FREE TOPUP CLUB — YOYO HOLDINGS PTE. LTD.Free App